युएईसँगको खेलका लागि पारस खड्काको कप्तानीमा नेपाली टोली घोषणा, काे-को परे? – Deshko News
Home » खेलकुद » युएईसँगको खेलका लागि पारस खड्काको कप्तानीमा नेपाली टोली घोषणा, काे-को परे?
युएईसँगको खेलका लागि पारस खड्काको कप्तानीमा नेपाली टोली घोषणा, काे-को परे?
विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप अन्तर्गत युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) सँगको खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसिसी)का प्रतिनिधि अमिनुल इस्लाम, मुख्य प्रशिक्षक जगत टमटा र कप्तान पारस खड्काको छनोट समितिले सोमबार १४ सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा गरेको हो ।
नेपालले दोस्रो चरणमा छनोट भएका २० खेलाडीबाट युएईसँग खेल्ने ४ वैकल्पिकसहित १४ सदस्य नेपाली टोलीको घोषणा गरेको हो । नेपाली टोलीमा भेट्रान स्पिनर शक्ति गौचनले टोलीमा पुनरागमन गरेका छन् । शक्ति अस्वस्थताका कारण हङकङसँगको खेलमा टिममा रहेका थिएन् ।
यस्तै, हङकङसँगको खेलमा टिममा रहेका सुशील कँडेल टोलीबाट बाहिरिएका छन् । अन्य टोलीमा खासै परिवर्तन भएका छैनन् । वैकल्पिक मध्येका दुई खेलाडी अनिल कुमार साह र जितेन्द्र मुखिया पनि टोलीसँगै रहेर युएई जानेछन् ।
च्याम्पियनसिप अन्तर्गत सातौं चरणमा नेपालले युएईसँग आगामी डिसेम्बर ६ र ८ मा खेल्दैछ । दुई टोलीबीचको खेल अबुधावीको शिख जायेद रंगशालामा हुनेछ । च्याम्पियनसिपबाट नेपाल र युएई दुवै टोली डिभिजन–२ मा घटुवा भइसकेका छन् ।
च्याम्पियनसिपको छैटौं स्थानको लागि नेपालले ९ अंक जोडेको छ भने पुछारको युएईले ६ अंक जोडेको छ ।